Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Rafael Leao Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Rafael Leao na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ka o buru, Web, Net Worth na Personal Life.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke ndị na-asụ Portuguese n'asụsụ Almada. Ọ na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama AC Milan. Iji nye gị ezigbo uto nke ọdịdị ọdịdị nke Rafael Leao's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya.
Site na nwata rue oge, nke a bu ihe omuma nke Rafael Leao.
Eeh, ụfọdụ Fans maara na ihu dị akpọrọ 'Portuguese Mbappe.' Nke a bụ n'ihi na o nwere atụnyere ndị France na France Kylian Mbappe maka ụdị egwuregwu ya dị ịtụnanya.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ejirila nkenke Ndụ Akụkọ nke Rafael Leao. LifeBogger akwadebewo ya, maka ịhụnanya maka egwuregwu ahụ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Rafael Leao Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha ahụ Ihe mkpuchi. A mụrụ Rafael na 10th ụbọchị nke June 1999 na ndị mụrụ ya, Mr na Mrs Conceição Leão n'obodo Almada na Portugal.
Mgbe amuru ya, enyere ya aha pụtara Ọdụm-Obi. Ndị na-agba ọsọ bụ otu n'ime ụmụ isii (ụmụnne nwoke anọ na ụmụnne nwanyị abụọ) amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne ya na nna ya ndị nọchiri anya.
Zute ndị nne na nna Rafael Leao - Ọ dị ka nna ya na nne ya dị nro.
Nwa amaala Almada jiri otutu oge ya na otutu umuaka umuaka ndi nogidere buru uzo ya. Malite na ụmụnne ya nwanyị bụ Paulo na Bianca Leao (ejima). Nwanne nwanne nwanyị Rafael ọzọ bụ Nadia Leao onye na-erughị 10 n'oge ọ na-ede Bio. Ọga n'ihu nọrọ na nwata ya n'obodo Almada. Ọ dị n’akụkụ osimiri Tagus, na-abụghị Lisbon.
AC Milan na-aga n'ihu ya na ụmụnne ya biri ndụ siri ike n'oge ọ bụ nwata, nke hụrụ ha ka ha na-achụ ọtụtụ àjà. N'etiti ụmụnne ya niile, Rafael dị iche dị ka ndị mụrụ ya nyere ya aha nna. Ndi ama ọfiọk ke Leão ọwọrọ “ekpe?” Ndị bọọlụ ga-ebi ndụ ike na ọchịchị.
Rafael Leao Ezigbo Ezinụlọ:
Agbanyeghị na ndị nne na nna ahụ na-aga n'ihu bụ ndị kwabatara, ha dara ogbenye mana ha abụghị ọgaranya. N'agbanyeghị nke ahụ, Leao nwere ezigbo nwa na-etolite n'etiti ụlọ na ọ sitere na ezinụlọ dị umeala n'obi. Ọbụna dị ka nde ndị na-agba ọsọ nde, ndị mụrụ ya ka na-arụ ọrụ dị ka ndị nkịtị na Lisbon. Rafael Leao's mum bụ onye na-edozi isi mgbe papa ya, onye ọrụ obodo.
Na-egwupụta akụkọ ihe mere eme nke dara ogbenye ya, sharpshooter na-enye ndị na-eto eto ntakịrị ọhụụ banyere ụlọ ebe ọ tolitere na Portugal. The AC Milan kpakpando na-amata enweghị ezinụlọ ya na foto a. Ọbụna o kwere nkwa iji ego bọọlụ ya dozie ihe a.
Edemede a na - agụ - “Etoro m ebe a dịka oke ka m wee bụrụ ọdụm.”
Rafael Leao Ezinụlọ:
Ee, anyị maara na ọ si Portugal. Eziokwu bụ, kpakpando bọọlụ nwere mgbọrọgwụ ndị nna ochie Africa. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ndị mụrụ Rafael Leao si Africa, nwee mba dị iche iche. Nna ya si Angola mgbe nne ya si Sao-Tomé-Et-Principe. Ha abụọ zutere dị ka ndị na-akwaga na Portugal wee kpebie ịmalite ezinụlọ.
Anyị mere nyocha iji chọpụta ebe papa ya na mama ya si.
Rafael Leao Na-agbagha Akụkọ nke Football:
Na-etolite n'obodo Almada, ọ malitere itinye aka na bọọlụ site na nwata. N'ezie, ubi na ala mmiri nke obodo Leao na-echekwa oge ọ bụ nwata na-echeta bọọlụ. Icheta ihe ọ na-ewere n'akụkọ ihe mere eme, AC Milan na-aga n'ihu kwuru otu oge;
Mgbe m dị obere, m na-egwu bọl kwa ụbọchị. Mgbe ụfọdụ anaghị m erute nri ehihie ma ọ bụ nri nke nne na nna m.
Naanị mgbe m ji obere nri ruru unyi ka m lọtara n’ụlọ. N'ezie, a na-ejizi sneakers ọhụrụ nna m zụtara ejizi ya.
dị nnọọ ka Cristiano Ronaldo, Rafael Leao bere ákwá mgbe ọ bụla ọ tụfuru egwuregwu. Gị ndị enyi ya akpọghị ya Kwaa ákwá. Ọ bụ nwatakịrị nwere mmetụta uche n'ezie, onye na-echegbu onwe ya ịghara ịhapụ egwuregwu.
Eziokwu Mmụta - Otu Rafael Leao si hụ ụlọ akwụkwọ:
Na mbu, nne na nna nna ya gwara ya ka ọ gbado anya na agụmakwụkwọ. Rafael gwara ha na ọ dị mma idozi ha abụọ. N'oge ahụ, ọ bụ nanị obi ụtọ n'inwe egwuregwu n'egwuregwu football na ịgụghị akwụkwọ. Leao gara ụlọ akwụkwọ praịmarị mana ọ kwụsịrị ka o wee nwee ike ịgbaso nrọ. N'okwu ya n'oge a gbara ajụjụ ọnụ;
Enweghị m ike ilekwasị anya na agụmakwụkwọ n'ihi na m na-agbaso nrọ. N'etiti ụfọdụ klaasị m ga-aga ọzụzụ. Enweghị m ndụ akwụkwọ nke ọtụtụ nwere.
N'oge ahụ, mgbe ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị na-aga akwụkwọ, Rafael ga-anọnyere ezinụlọ ya ka o wee nwee ike ịkwadebe maka ọzụzụ. Na Sọnde, ọ ga - ezu ike - ka ọ dị mma nke ọma maka izu nke na - aga ngwa ngwa.
Akụkọ banyere otú football si malite:
Rafael malitere iso ndị enyi ya egwu egwuregwu na ala nke ụlọ ya. N'ụzọ dị mma, ọ na-apụta na ebe onyeisi oche nke Amora football club dị gburugburu ezinụlọ ya.
Otu ụbọchị, ihe dị ka afọ 7 ma ọ bụ 8, ọ gwara m okwu mgbe ọ hụrụ m ka m na-enye ndị enyi m windo ya. AMORA BOSS gwara m ma m nwere ike ịbanye na klọb ya.
M ji ọ happinessụ dị ukwuu gaa ebe ahụ - iji kwanyere ọkpụkpọ òkù ya ùgwù.
N’egwuregwu mbụ m, achọpụtara m na bọọlụ n’okporo ụzọ dị iche na ACADEMY football.
Na Amora ndorondoro na Benfica Loss:
Rafael Leao nọrọ naanị izu atọ na Amora FC. N'ime abụọ nke mbụ ya, a họpụtara ya maka nnukwu asọmpi. Mgbe ndị na-egwu egwu nwere mmasị, Benfica họpụtara Rafael onye zigara ya na 21 ụkwụ, ihe owuwu nke kwụsịrị ịdị taa.
Ndị nne na nna Rafael Leao na Benfica kwetara na ọ ga-esonyere ha na njedebe nke oge. Ọ dị nwute, na nsogbu bịaara. Papa ya na mama ya enweghị ike ịkwụghachi nwa ha nwoke ọzụzụ. Nke a mere Rafael ka ọ pụọ ma sonye na ụlọ akwụkwọ ndị ntorobịa a ma ama na Sporting CP - nke nyere ebe ka mma.
Ndụ ndụ nke mbụ na Green na Whites:
Egwuregwu bọọlụ mgbe ahụ tolitere na usoro ntorobịa Sporting Lisbon. Ka ọ na-erule oge Leao dị afọ 14, o siri ike ileghara talent ya anya. Nwatakịrị na onye nkuzi nwata ahụ n’oge ahụ, Tiago Fernandes, gwara France Football na:
Ahụtụbeghị m nwatakịrị dị ka Leao na-eji bọl eme ihe. Ọ na-eme ihe ndị mmadụ na-enweghị ike ime. ”
Naanị mgbe nke ahụ gasịrị, Tiago Fernandes wee kpọọ Leao “ọkpụkpọ kacha mma na akụkọ egwuregwu Sporting. ” Ọ gwakwara L'Equipe na Rafael dị ka onye ndu (onye isi ndị ntorobịa) bụ onye enyere aka ka mma karịa Cristiano Ronaldo - n'otu afọ. N'ezie, nkwenye siri ike ka dị na nwata nwoke a nwere nsọpụrụ dị ka onye ọkpụkpọ kachasị mma n'akụkọ ihe mere eme nke Sporting CP Academy.
Rafael Leao Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ezie, Leao kwesịrị mkpuchi ahụ. Onye na-eto eto nwere ọganihu site na Sporting CP na-eto eto nọ n'ọkwá maka afọ asatọ ọzọ tupu ya emee ka ọ bụrụ onye mbụ ọ dị afọ 17. Na egwuregwu ahụ, ọ bịara na ọkara nke abụọ wee banye na Braga.
Ọzọkwa, ọ banyere n'akwụkwọ akụkọ ihe mere eme dị ka onye ọkpụkpọ nke ọdụdụ nke ụlọ ịgba egwu megide Porto na nkwụsị 1-2. N’ụzọ dị egwu, Leao chọtara ụgbụ ahụ site na itinye nnukwu ihe Iker Casillas. N'ezie, Leao so n'òtù ndị meriri n'asọmpi Portuguese.
N'ihe dị ka ọ gaara enwe mmasị ịnọnyere Verde e brancos, ọ nweghị ihe ọzọ ọ ga-eme ma ọ bụghị ịpụ. Ejikọtara ụzọ ọpụpụ ya na mbuso ọgụ na ndị egwuregwu nke klọb site n'aka ndị egwuregwu na-ewe iwe. Site na ụzọ ọpụpụ ya, Leao (agadi 19) ghọrọ onye nweere onwe ya wee banye maka Lille.
Rafael Leao Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Mgbe Milan bịara ọkpụkpọ oku, nwa afọ Almada ahụ ji obi ụtọ nara ya n'ihi ntinye Red na Black iji kwalite ndị na-eto eto. Ọ bụ na Milan ka Leao ghọrọ onye ama ama maka isi ihe mgbaru ọsọ kachasị ọsọ na akụkọ Serie A na sekọnd isii. Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ kachasị ọsọ kachasị na Europe.
Iguzo na 6ft 2, nnukwu onye egwu egosila na o nweela isi ihe dị mkpa nke oge a na-aga n'ihu. Ejiri usoro ya tụnyere nke Sergio Aguero, mgbe ike ya na-eme ka ọ dị mma dị ka Romelu Lukaku.
Site na ebumpụta ebumpụta ụwa na ịkụ mbọ n'ihu ihe mgbaru ọsọ ahụ, ụbọchị dị mma na-echere nwa ọdụm ahụ. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Rafael Leao ọ nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye ka ọ bụrụ?
You nọ ebe a inweta ozi banyere ịga n’ihu? Have nwere agụụ na-agụsi ike ịchọpụta onye bụ enyi nwanyị Rafael Leao? Ya mere, anyị onwe anyị na ịkwụwa aka ọtọ niile, anyị enyochaala ebe niile, mana enweghị akara nke Wag.
Onye bụ enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye Rafael Leao ga-abụ?
Nwere ike na-akpa na nzuzo? Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ, ọ bụ naanị oge tupu ndụ onwe ya aga n'ihu ọha n'ihi na bọọlụ kpọrọ ihe nzuzo asị. Mana anyị chere na onye dị nkọ dịka Leao n'ihu ihe mgbaru ọsọ agaghị enwe nsogbu na ijikwa ihe nzuzo.
Maka nke a, LifeBogger kwubiri n'ụzọ doro anya na Rafael nwere ike nwee enyi nwanyị, ma eleghị anya onye nne na nna ya kwadoro ka ọ bụrụ nwunye ya na nne nke ụmụ ya n'ọdịnihu. At n'oge a, ọ na-ahọrọ ime ka mmekọrịta ahụ bụrụ nke onwe. Nke a bụ ezigbo nso anyị nwere ike ịnweta - nke enyi nwanyị ekwuru.
Rafael Leao Ndụ nke Onwe:
Iji nweta foto doro anya, anyị ga-agwa gị gbasara onye egwu ahụ sitere na mgbọrọgwụ ezinụlọ Angola na Sao-Tomé-Et-Principe.
Nke mbu, Rafael Leao kwenyere na ya bu nwa nwoke ihere ma nwee obi uto na anya mmiri. Onye na-egbu ihe na-eji oge kachasị mma naanị ya ma wepụ ihe ọ bụla na ihe ndị ọzọ iji weghachite ume ya.
N'otu oge, mgbe ọ na-eweghachite ike ya - nke dị anya na bọọlụ - ọ na-atụgharị uche nke ọma n'oge gara aga wee gwa ndị Fans ya;
N'ime ndụ a, ị gaghị enwe ike ịme mmadụ niile obi ụtọ n'agbanyeghị agbanyeghị ezigbo mmadụ.
Ha ga - achọta ọtụtụ ihe iji gbalịa iti gị ihe, ọ bụkwa ebe ahụ ka ị ga - adị ike.
Nakwa na ụwa a, ọ bụghị mmadụ niile chọrọ ịhụ ka ị meriri. N’ezie, obughi ihe nile di n’elu uwa di ebube.
Ndụ Rafael Leao:
Ka anyị tụlee etu sharpshooter si eme ma na-emefu ego ya. Iji malite, ọnụ ahịa ya ruru ihe ruru nde euro 3 (2020 stats). Agbanyeghị, anyị achọghị ọnụ ọgụgụ ịmara na Leao na-ebi ndụ okomoko - nke anya na ụgbọ ala na-ahụ ngwa ngwa.
Ihe akaebe nke ụdị ndụ a gụnyere ụlọ okomoko / ụlọ ọ bi na Milan. Nkwado nke Leao na-akwado nkwado ha nke ọma nke of 39,473 kwa ọnwa yana € 1.4 nde kwa afọ. Hụ ụfọdụ n'ime ụgbọ ala ya dị egwu.
Rafael Leao Ndụ Ezinụlọ:
Ọdịnihu na-akọwa ezinụlọ ya dị ka akụ kachasị oke ọnụ ahịa ya nke soro ya nọrọ n'agbanyeghị mmiri. N'ebe a, anyị ga-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Rafael Leao. Anyị ga-emekwa nkọwa gbasara ụmụnne ya na ndị ikwu ya.
Banyere Rafael Leao Nna:
You ma ihe kpatara o ji etinye ekwentị mgbe ọ na-egwu egwu?… Onye na-eti ihe ahụ na-eme nke ahụ maka nna ya nke na-ele egwuregwu ya niile wee kpọọ ya mgbe e mesịrị ka ọ kwuo maka ya. Ememe ịkpọ oku ekwentị bụ naanị ụzọ ịgwa papa ya na;
Hey papa m, naanị m gbara. Ka anyị kwuo banyere ya ma e mesịa.
Dị isi nke onye na-eti ihe na-eme ka obi dị nna ya ụtọ. Papa Rafael Leao bụ onye pụtara ọtụtụ ihe na ya. Ọ na-akọwa ya dị ka onye nwere ike ịbụ enyi na enyi, oyi, ike na nnọọ kpọmkwem. N'okwu ya;
Ọ bụrụ na o nwere ihe ọ chọrọ ịgwa m, ọ ga-ekwu ya ozugbo. Papa m na-esikarị ike ịnụ mgbe ụfọdụ, mana n'ikpeazụ, ọ na-ekwu eziokwu mgbe niile.
Banyere mama Rafael Leao:
Na February 2019, ndị ịgba ọsọ gọziri nwanyị mụrụ ya ntutu. Ihe ịtụnanya ahụ mere na Avenida Paiva Couceiro, bụ isi azụmahịa na Lisbon. Le, nne ya na-ebupụta salonlọ Mmanya ahụ site n'ime ka nwa ya nwoke bụrụ onye ahịa mbụ ya - ekele maka mmezu nke nrọ ya. N'ikwu okwu na Akwụkwọ akụkọ Accord, Nwa nwoke mummy kwuru otu oge;
“Inwe ntutu isi bụ ihe mama m chọrọ. Ihe m nwere ike ime bụ inyere ndị ezinụlọ m aka ma nye ha ihe kacha mma m nwere ike imeli. Nke a bụkwa ego ”
Banyere Rafael Leao Brothers:
N'ajụjụ ọnụ, AC Milan kpakpando kwuru na ya nwere ụmụnne atọ. N'oge ọ bịanyere aka na klọb ahụ, ụmụ nwoke atọ a kwụ n'akụkụ ya - ihe omume nke mere ka ndị agbụrụ chee na ha bụ ụmụnne ya. Ma, ọ bụ n’oge na-adịghị anya, anyị ga-amata aha ụmụnne ya ndị nwoke atọ.
Banyere Rafael Leao istersmụnna:
Ejiri ejima ejiri gọzie ezinụlọ ndị ama ama - Paulo na Bianca. Ha bụ 10 afọ (gburugburu 2019). Ismụnne ya nwanyị agwụghị ebe ahụ. Rafael nwekwara nwanne nwanyị ọzọ nta, Nadia onye dị afọ anọ karịa Paulo na Bianca.
Banyere ndị ikwu Rafael Leao:
Dị ka ndị na-agụ akwụkwọ anyị a ma ama, anyị chọrọ ịma banyere nne na nna ya na nne na nna ya. Enwekwara ihe mkpuchi na njirimara nke nwanne nna Rafael, nwanne nna ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya. Anyị ga-eme ka ị mara mgbe anyị chọpụtara.
Eziokwu efu banyere Rafael Leao:
Iji mechie edemede a na Biography nke na-aga n'ihu, lee eziokwu a na-amachaghị na obere ihe banyere ya.
Eziokwu # 1 - Ihe kpatara ndị agbata obi ya jiri kpọọ ndị uwe ojii:
N'oge ntiwapụ nke COVID-19, Rafael Leao laghachiri na ezinụlọ ya na Portugal - mgbe nkwụsị Njikọ Italiantali. N'ịchọ ịchụso usoro ọzụzụ ya ka ọ ghara ịla n'iyi, ọ gbanwere egwu ya n'olu dara ụda - nke kpasuru ndị agbata obi ya iwe.
Ha mere mkpesa na ọdụ ndị uwe ojii maka Noise Nuisance. Dabere na mkpesa ndị bi na Avenida Central do Pinhal Conde da Cunha, na Amora, ha kwuru;
Kwa ụbọchị, Rafael LeAo na-akpọrọ otu enyi anyị maara dị ka DJ n'ụlọ ya. Ha niile kwekọrịtara itinye aka n’egwú siri ike.
Obere oge ka akụkọ ahụ gasịrị, ndị ọchịchị Portuguese gbalịrị ịgwa onye na-eme egwuregwu egwuregwu okwu, mana ha azaghị.
Eziokwu # 2 - Otú o si ahụ Zlatan:
Isi ihe mgbaru ọsọ kachasị ọsọ na Serie A na-egosi na ọ bụ cheetah na ọdụm. Ihe dị ka Nọvemba 2020, akwụkwọ ozi Leao na Instagram mere ka ndị Fans ghọta ọnọdụ ya na onye Eze Milan nọ - yana ebe ọ na-eguzo.
Enweghị ajụjụ, Leao ga-abụ onye a kwanyere ùgwù ka ọ bụrụ I soro Ibrahimovic Zlatan na-egwuri egwu na ndụ n'ezie. Onye na-eti ihe na-ahụ ya dị ka nwanne ya nwoke nke okenye.
Eziokwu # 3 - rygwọ ọnwa na ego kwa nke abụọ:
Kwa Afọ: € 1,400,000
Ọnwa kwa: € 116,667
Kwa Izu: € 39,473
Kwa :bọchị: € 5,639
Kwa elekere: € 235
Nkeji nkeji: € 3.9
Kwa Nke Abụọ: € 0.06
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Rafael Leao's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 4 - Mmekọrịta ya na Kylian:
Onwere ihe kpatara eji akpo AC Milan uzo Portuguese Mbappe. Ọ bụrụ na ị lelee anya nke ọma, ị ga-ahụ na ụdị egwu ya, afọ na ọsọ ya na kpakpando French. Dika ozo, Kylian Mbappe bụ isi iyi nke mmụọ nsọ na Leao, onye choro inweta mmeri na utu aha dika kpakpando French.
Eziokwu # 5 - FIFA 2020 Fim:
Rafael Leao nwere ngụkọta fim nke 74 isi na ike nke 83. Nke ahụ adịghị mma nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị jụọ anyị. Ndị na-edekọ aha kwesịrị ka mma, anyị nwere olile anya na FIFA ga-ekwupụta nke a n'oge na-adịghị anya.
Eziokwu # 6 - Okpukpe:
Dị ka aha ya na-egosi, enwere ike ịdị elu na onye gburu ya bụ onye kwere ekwe. Leao ga-abụ Onye Kraịst. Okwesiri ighota na aha ya Rafael bu uzo di iche nke aha Raphael.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na Rafael Leao. Ihe omuma akwukwo nke onye akwukwo na ihe omuma na-akuziri anyi na ike esiteghi na ike nke aru kama obu site na ochicho. Ọ dị anyị mkpa ugbu a ịja ndị nne na nna onye egwu ahụ nkwado maka ọrụ ya n'okwu na omume.
Na LifeBogger, anyị na-anya isi n'inye akụkọ nwata na akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n ’ịhụ ihe ọ bụla na-adịghị mma, kpọọ anyị. Ma ọ bụghị ya, ka anyị mara ihe ị chere banyere Leao na ngalaba nkọwa. Iji nweta nkọwapụta ngwa ngwa banyere Bio nke onye na-eti ihe, jiri tebụl anyị Wiki.
Aha zuru ezu: Rafael Leao.
aha otutu: Ihe mkpuchi.
Ụbọchị ọmụmụ: Bọchị iri nke June 10.
Ebe amụrụ onye: obodo Almada na Portugal.
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Conceição Leão.
Ụmụnne: Brothersmụnna nwoke atọ (Paulo, Bianca na Nadia).
Ogo n'ogo: 6 Ugbo, 2 Inches.
Ogologo na cm: 188cm.
Famiy Mmalite: Angola.
Ihe omume: Egwuregwu, igwu mmiri yana ịnọnyere ezinụlọ na ndị enyi.
Arụsị: Loïc Remy.
Ezigbo Net: Ihe ruru 2 nde euro (2021 stats).